AMAQINISO ABALULEKILE NGEWAYINI ELIBOMVU ELIZOSHAYA INGQONDO YAKHO - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Imininingwane Ebalulekile Ngewayini Elibomvu Elizoshaya Ingqondo Yakho
Ikhaya Ezempilo Ukuphila kahle Wellness oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh ngoFebhuwari 17, 2018
Kuyisisho sangempela ukuthi 'iwayini lingumngane omkhulu wentombazane'. Iwayini lihlala lifana nomngane omuhle wabesifazane, ngoba bahlala bekhetha lesi siphuzo kunanoma yisiphi esinye isiphuzo esidakayo.
Iwayini linomlando omude, othakazelisayo futhi libhekwa njengesiphuzo esidala kakhulu. Iwayini elibomvu lenziwa ngezinhlobonhlobo zamagilebhisi amnyama kanye nombala wewayini kusuka ku-violet kuya ekubomvu kwezitini nokubomvu.
Iwayini elibomvu lenziwa nje ngokuchoboza nokubilisa amagilebhisi anombala omnyama, acebile ngama-antioxidants amaningana. Iwayini elibomvu linezinzuzo eziningana ezibandakanya ukulwa nokuguga, ukukhulisa amasosha omzimba kanye nempilo yenhliziyo.
Amagilebhisi anama-antioxidants amaningana afana ne-resveratrol, ama-catechins, i-epicatechin nama-proanthocyanidins. Lawa ma-antioxidants asiza ekwehliseni ubungozi bezifo zenhliziyo futhi alwe nomonakalo omkhulu wamahhala.
Iwayini elibomvu likulungele, kepha ukusebenzisa ngokweqile kungaba yingozi. Ukusetshenziswa kwewayini elibomvu ngobuningi obulinganiselayo kungavimbela izifo zesibindi, kuvikele umdlavuza wesinye kanye nokuwohloka komqondo.
Okuqukethwe utshwala obusuka ewayinini elibomvu kusuka kumaphesenti ayi-12 kuye kumaphesenti ayi-15 futhi kuqukethe ama-calories ayi-125 ne-zero cholesterol eno-3.8 gram wama-carbohydrate.
Manje, ake sibheke amaqiniso abalulekile ewayini elibomvu.
1. Ukuphuza iwayini elibomvu ngemithamo emincane kungcono
Ukuphuza okumaphakathi iwayini elibomvu kungcono kunokungaliphuzi nakancane. Uyazi ukuthi kungani? Iwayini elibomvu linama-antioxidants ehlisa ingozi yezifo zenhliziyo nemithambo yegazi, uhlobo lwesibili sikashukela nokufa. Uma uphuza iwayini elibomvu ngokweqile, kungahle kube yingozi enkulu empilweni yakho.
2. Iwayini Elibomvu Linama-polyphenols
Iwayini elibomvu linama-polyphenols afaka i-tannin, i-resveratrol, kanye nezinhlanganisela zezitshalo ezingaba ngu-5000. Izinzuzo zewayini elibomvu zivela kwi-tannin, ebuye ibe khona ngoshokoledi abamnyama netiye eliluhlaza. I-Tannin ivimbela i-cholesterol evimba imithambo yegazi, lokhu kuthuthukisa impilo enhle yenhliziyo.
3. Amanye amawayini Akulungele Impilo
Yize kunzima ukuqonda ukuthi imaphi amawayini abomvu angcono kakhulu empilweni yakho, ake sikuqondise kuwo. Khetha iwayini elibomvu elomile kunewayini elimnandi khetha iwayini elibomvu elinotshwala obuncane kunotshwala obuningi noma hamba iwayini elibomvu elinezinga eliphakeme le-tannin.
4. Kuthuthukisa impilo yezocansi
Leli elinye lamaqiniso athakazelisa kakhulu ngewayini elibomvu. Uma uphuza iwayini elibomvu njalo, kepha ngobuningi obulinganiselayo, bungathuthukisa impilo yakho yezocansi. Abesifazane abaphuza izingilazi ezi-2 zewayini nsuku zonke bajabulela ubumnandi bomzimba kakhulu kunabesifazane abangaphuzi nhlobo iwayini elibomvu.
5. I-Red Wine Inezindawo Zokulwa Nomdlavuza
Amawayini abomvu aqukethe ama-antioxidants anezinto ezilwa nomdlavuza kanye nemiphumela yokuvikela impilo empilweni. Iwayini elibomvu lenziwa ngamagilebhisi kanti isikhumba samagilebhisi sicebile ngama-antioxidants, anamandla okuvimbela zonke izinhlobo zomdlavuza.
6. Iwayini liphansi kumakhalori
Amawayini abomvu awathinti ukhalo lwakho futhi awukhuthazi amafutha esiswini. Abesifazane abaphuza ingilazi yewayini elibomvu ngosuku banamakhilogremu acishe abe ngu-10 kunamafutha omzimba kunabesifazane abangaphuzi. Kungenxa yokuthi iwayini elibomvu linama-calories aphansi namafutha amancane.
7. Iwayini Elibomvu Linciphisa Ukucindezeleka
Iwayini elibomvu liqukethe i-resveratrol, ikhompiyutha elungisa i-DNA, ecindezela izakhi zofuzo futhi ikhuthaze impilo ende. Ukuphuza ingilazi yewayini elibomvu kusiza ukunciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka. Ngakho-ke, qala ukuphuza ingilazi yewayini elibomvu kanye nezidlo zakho zasebusuku.
8. Iwayini Elibomvu Lithuthukisa Ukulala
Iwayini elibomvu liphezulu kwi-melatonin, inhlanganisela ebangela ukulala. Lokhu kuvela kumagilebhisi okwenziwe ngawo iwayini elibomvu. Uma unenkinga yokulala noma uhlushwa ezinye izifo ezihlobene nokulala, vele uphuze ingilazi yewayini elibomvu. Qiniseka ukuthi awuphuzi ngaphambi kokulala.
9. Iwayini Elibomvu Libambezela Ukuguga
Ingilazi yewayini elibomvu izokwenza isikhumba sakho sikhanye futhi ivimbele ukuguga kwesikhumba. Ama-antioxidants newayini elibomvu anciphisa ukucindezeleka okwenziwa yi-oxidative amangqamuzana esikhumba abhekene nakho. Iphinde ivikele isikhumba sakho emisebeni ye-UV eyingozi.
10. Iwayini Elibomvu Lilimaza Imiphumela Yokubhema
Yebo, kuyiqiniso ukuthi iwayini elibomvu linamandla amakhulu okulimaza imiphumela emibi yokubhema. Iwayini elibomvu lingasiza ekwehliseni ukuvuvukala futhi livimbele ukuguga kwesikhumba, okuvame ukuqala ukwanda lapho uyeka ukubhema.
Uma ukuthandile ukufunda le ndatshana, ungakhohlwa ukuyaba.
Izinzuzo Ezi-11 Ezimangazayo Zezempilo Zezithelo Zesifiso
ungasusa kanjani ezindebeni ezimnyama
imifino engadliwa iluhlaza e-india
iso elisesandleni licwayiza izindlela zesilisa e-india
kanjani ukwenza isikhumba sibe sihle ngokwemvelo
ungasithola kanjani isikhumba esifanele ngokwemvelo ngokushesha